China ubhaka T-B3982 ukwenziwa kunye nefektri | TIGERNU
I-TIGERNU yasebusika uthotho lwamadoda ubhaka wefashoni
Umthamo: La madoda ubhaka ubungakanani yi-30 * 15 * 43cm (L * W * H), ilungele ukuya kwi-15.6inch laptop.Igumbi eliphambili ligumbi ngokwaneleyo kwiincwadi zakho, i-headphone, isipaji, umnxeba, ibhanki yamandla njalo njalo. Iipokotho ezimbini ezisecaleni zilungele ibhotile yamanzi kunye nesambrela. Iipokotho ezimbini ezingaphambili kunye nomva wepokotho yokulwa ubusela zikunika ukufikelela okulula kwizinto zakho ezincinci. Yibhegi yenjongo ezininzi kwaye inokugcina zonke izinto zakho zilungelelene.
Umgangatho: Ubhaka wenziwe nge-splashproof & ubungqina beoyile kunye nelangatye ekhawulezayo yedangatye. Yomelele kwaye i-eco-friendly izinto, ukukrazula okuchaseneyo kunye nomgangatho ohlala ixesha elide. Iiziphu kunye nezinye izinto ezikumgangatho ophezulu zilungelelaniswe ne logo yeTIGERNU.
Iimpawu: Yakha kwizibuko le-USB kwaye intambo ye-USB enokufumaneka ikunika indlela elula ngakumbi yokutshaja ifowuni, ithebhulethi, njl njl. Umngxuma weefowuni unika inkululeko yakho ukonwabela umculo nanini na. Umtya obonakalisayo wenza ukuba ubonakale ngakumbi kwaye ukhuseleke ebusuku.Iimilo zomtya zihlengahlengiswa kwaye zinokunciphisa uxinzelelo egxalabeni.
Ubhaka weTIGERNU ulungele nawuphi na umsitho kunye nabaphi na abantu.
Igama lebrand: TIGERNU
Inombolo yomzekelo I-T-B3982
Uhlobo: Laptop ubhaka
Umbala: Mnyama, Ngwevu, Luhlaza
Ukupakisha: Iifayile ezingama-20 / i-ctn
Ubukhulu: 28 * 17.5 * 43cm
Yanela ubungakanani beelaptop: 15.6 ii-intshi
Ukusetyenziswa: Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla
Phawu: Into evikela amanzi
Egqithileyo Ingxowa yomyalezo T-S8119
Okulandelayo: Ibhegi emfutshane T-L5188
Uluntu lwaseAiqun, Shanqian Rd, kwilali yaseXinyang, eHuadu Shiling, eGuangzhou, China